साँचो माया पाएपछि केटाहरुले देखाउँछन् यस्तो व्यवहार, तपाईमा पनि देखियो की ? | सुदुरपश्चिम खबर
साँचो माया पाएपछि केटाहरुले देखाउँछन् यस्तो व्यवहार, तपाईमा पनि देखियो की ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १५, २०७८ 0
भनिन्छ, मायामा नै संसार अडिक छ। साँचो माया त्यही हो जसले आपतमा सहयोग गर्छ, जो जहाँ एक अर्काका लागि तन, मन, धन सबै किसिमले सहयोग, समर्पण गर्ने र संघर्ष गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ अनि एक अर्काप्रति अटुट विश्वास र ढृड निश्चय हुन्छ।
माया आकाश भन्दा असिम छ, सागर भन्दा गहिरो छ, पवन झै चञ्चल अनि सामुन्द्रीक पानी भन्दा कञ्चन छ। माया अपार छ, विशाल छ अनि माया महान छ । मायामा आत्मियता छ, मधुरता छ, विशाल छ अनि मायामा भावुकता पनि छ। मायाको उद्गम बिन्दु एउटै हो ।
माया विश्वास हो, मायामा आत्मसन्तुष्टि, सद्विचार, सद्भावना र सद्चरित्र छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला । मायामा सर्मपण, दया, करुणा, सहयोगी भावना हुनैपर्छ । मायामा सुख, आनन्दका सारा संसारको खुसीमा नै मायामा छ।
प्रत्येक व्यक्तिको जिन्दगीमा यस्तो समय आउँछ जब उ कसैलाई माया गर्छ र आफूले माया गरेकोले आफूलाई पनि माया गरोस भन्ने चाहन्छ । यदि कसैले कोहीसंग माया गर्छ भने उसको जीवनमा केही न केही परिवर्तनहरु आउछन् । तर साँचो माया पाएपछि केटाहरु के गर्छन् भन्ने वारेमा ६ वटा सुत्रहरु यस प्रकार छन्।
१) कसैसंग साँचो माया भएपछि केटाहरु बेकारको कुराहरु गर्न छोडिदिन्छन् । उनीहरु आफ्नो पार्टनरसंग बसेर भविष्यका कुराहरु गर्न मन पराउछन् ।
२) साँचो माया पाएपछि केटाहरु यो कुरालाई कसैको अगाडी लुकाउन चाहादैनन् । साथी, भाई, बहीनीहरुसंग आफ्नो पार्टनरलाई भेटाउछन् ।
३) माया बसेपछि केटाहरु केटीको परिवारसंग भेट्न र उनको परिवारको बारेमा जान्नको लागि आतुर हुन्छन् ।
४) केटाहरु भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुन्छन् । यसको बारेमा कुरा पनि गर्छन् ।
५) जब कोही केटाको साँचो माया बस्छ त अचानक केटाहरु चाहिएको भन्दा बढी केयरिंग हुने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो मायालुलाई केहि चिन्ता नहोस भन्नेतिर नै सोची राखेका हुन्छन् ।
६) माया बसेपछि अचानक केटाहरुको केटीप्रति विश्वास बढ्न थाल्छ । नयाँ पुस्ता बाट सभार